 Panyaya dzamakanyora, zvakanaka kuti murume arege zvake kumbobata munhukadzi. Asi pamusana peupombwe huriko, murume oga oga anofanira kuva nomukadzi wake uyewo mukadzi mumwe nomumwe anofanira kuva nomurume wake. Murume anofanira kupa mukadzi wake zvaanofanira kumupa somurume wake, ndizvozvowo nomukadzi kumurume wake. Mukadzi haana simba pamusoro pomuviri wake asi murume wake; murumewo haana simba pamusoro pomuviri wake asi mukadzi wake. Regai kunyimana, kunze kokunge mabvumirana kuregera kwechinguva, kuti mumbonamata, asi mozodzokerana zvakare nokuti Satani angadaro akakuedzai nokutadza kuzvibata.
 “Kana vanakomana vomunhu mumwe vagere pamwechete, mumwe obva afa asina mwana mukomana, chirikadzi yaanosiya haifaniri kuroorwa nomutorwa. Muramu wake ngaamugarire nhaka achengetedzewo murao wenhaka. Mwana mukomana waanotanga kubereka achapiwa zita romuchakabvu kuitira kuti rirege kutsakatika muIsiraeri. Kana muramu uya asingadi kugara nhaka mukadzi womukoma kana munun'una wake ngaaende kuvakuru vakuru kuzambara kundomhan'ara achiti, ‘Muramu wangu ari kuramba kumutsiridza zita rehama yake muIsiraeri muno. Ari kuramba kuita basa rake rokundigarira nhaka.’ Ipapo vakuru vakuru vomuguta rake ngavamudaidze vataure naye. Kana akarambisisa achiti, ‘Handidi kutora mukadzi iyeyo.’ Mukadzi uya ngaaende kumuramu wake omubvisa shangu yake, omupfira mate kuuso, vakuru vakuru varipo obva ati, ‘Izvi ndizvo zvinoitwa kumunhu asingadi kuti musha womukoma kana munun'una wake ukure. Zita rake muIsiraeri muno richanzi; Imbayanyakubviswashangu.’
 Vanakomana vaDhavhidhi: vakaberekerwa kuHebhuroni ndeava. Wokutanga wacho ndiAmunoni waakabereka nomukadzi wake vaAhinoamu vokuJezirieri wechipiri ari Dhanieri waakabereka naAbhigairi vokuKarimeri wechitatuwo ari Abhusharomu, amai vake uyu ainzi Maaka mukunda waTarimai mambo weGeshuri. Wechina ndiAdhoniya amai vake ari Hagiti. Wechishanu ndiShefatiya waakabereka naAbhitari wechitanhatu ari Itireamu waakabereka nomukadzi wake Egira. Vatanhatu ava akavaberekera kuHebhuroni kwaakatonga ari kwamakore manomwe nemwedzi mitanhatu. Akazotonga kwamakore makumi matatu namatatu ari muJerusaremu. Vanakomana vaakazoberekerwa muJerusaremu ndevava: kunoti Shemea naShobhabhu naNatani naSoromoni vari vana kudai vaakaberekerwa naBhatishua mwanasikana waAmieri, kwoti Ibhari naErishama naErifereti, kwouya Noga naNefegi naJafiya kwouyawo Erishama naEridha naErifereti pamwechete vapfumbamwe. Vose ivava ndivo vana vaDhavhidhi vakomana tisingaverenge vanakomana vevarongo. Tamari ndiye hanzvadzi yavo.